Yakatumirwa ne Tranquillus | 31 Sea, 2018 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Edza kuita zvakanaka uye kuratidza unyanzvi hwako hwemutauro kuburikidza nekudzidzisa zvakanaka neProjekta Voltaire
Iyo Voltaire Project inodzidziswa zvakagadzirirwa kukubvumira kuti uvandudze kupora kwako zvishoma nezvishoma. Chinangwa chinokubatsira kuti uwane imwe yehutano hwakanaka mumutauro wechiFrench. Nhaka yayo yepamusoro ndeyokuti ichakudzidzisa zvakanaka pasinei nekutangira kwako.
Kutenda nekuwanda kwezviri mukati, chidzidzo ichi chaunoda iwe pachako chichakubvumira kuwana chikwata chakanaka nemakwikwi akakurumbira. Inofanira kuonekwa kuti inokurudzirwa nesangano rinotaurira Voltaire zviti zvaro! Ichi chikwata chepakutanga uye chigadziro chinopa iwe mukana wakaisvonaka wekuvandudza unyanzvi hwako hwepelenzi. Izvi pavanenge vachiendesa teknolojia yakasiyana-siyana yekudzidza isati yava kuzivikanwa. Iyo inonzi "Memortional Anchoring" uye chinangwa chekuwedzera kukura kwako.
Chivandudziro muchiFrench kuti chiwane purogiramu yakanaka yepelenzi uye kusimbisa kuvimbika kwayo mukunyora
Inofanira kuve yakagoneka kuti murairo wakanaka wehurukuro yechiFrench nguva dzose inowedzera mari yekuita kuti mushandi akugone iwe. Uye kunyange kana kunyora hakusi basa rako guru, iwe uchave uchida kuziva kuti ungazviita sei zvakanaka. Kunyora tsamba yekuregesa, kana kuti kudzorera mushumo wemusangano semuenzaniso.
Izvo zvaunosungirwa zvinowedzera zvakasimba kana basa rako rinosanganisira ukama hwakakwana nekutaura kwakanyorwa. Uye zvakajeka kuti iyi ndiyo mamiriro emabasa akawanda, mapoka ose akabatanidzwa. Kuziva kunyora nenzira yakarurama kushandisa mitemo yemitauro yeMolière inogona kuita kuti musiyano uite.
VERENGA Mutsara wekunyora kweiyo email
Mamwe mazwi angave achida kunyanya kufunga kuti kunyorwa kwakarurama. Zvidzidzo zvakanaka zveFrance zvinogona kuva zvakakosha panguva iyo mutauro weSMS uri kuwana pasi zuva nezuva mukutarisana ne circumflex. Ongororazve zvinyorwa zveFrench Grammar nekutevera zvakanyanya kudzidziswa paIndaneti inopiwa naProjet Voltaire. Icho chinonyanya kushandiswa nemitemo yepelenzi haichazove nezvakavanzika zvako.
E-Kudzidza zvidzidzo zvekuyeuchidza zviri nani mitemo yegiramu ne teknolojia yeAnchoring.
Uine e-kudzidza kuraira uye echimurenga tekinoroji yekusimudzira yako spelling ndangariro, iwe uchafanirwa kugadzirira kutaura zvakanaka pamhosho dzese marudzi. Kunyangwe iri yakakomba syntax kukanganisa kana kusiyiwa nyore kwemapureti, Memorandamu Anchoring inzira yekudzidza inovavarira kukupa huwandu hwemamoni kuti uve nechiperengo chakanaka nguva dzose.
Iyo Voltaire Project inovavarira kukupa iwe ese makadhi ari mumaoko ako kuti ubudirire mumakwikwi anozivikanwa. Nekutevera zvakanyanya kudzidziswa kunopihwa nepuratifomu, zviri pachena kuti hauzombozezezve nezve chiperengo chezwi. Kana pakubatana kwechiito. Zvichienderana nezinga rako, iwe unozobatsirwa nekudzidziswa kwakazara kuti uve nechokwadi chekuwana mamakisi akanaka pabvunzo dzako uye uwane iyo Voltaire Chitupa.
Kudzidzisa kwakakwana kwezvinyorwa zvepamusoro uye zvakanaka pasinei nezvinetso zveChiFrench
Kune vamwe vanhu, chiFrench chinongoita semutauro wokumwe. Ita mhosva pazvinhu zvose zveFrench spelling. Pasinei nezvikanganiso zvakawanda zvakaitwa nevakawanda vedu, Projet Voltaire inotipa nzira yekudzidzira nemamiriro ehutano-e-anhu hwekuyeuka.
The chipo chakapikirwa kuchikuva haangonzwiri kumisa vanhuwo zvikanganiso kuti wose anoita. vadzidzi vavo pamwe nedzidzo kuti vabudirire zvakaisvonaka kupfuura zvose, uye hapana kunonyadzisira achasiyiwa. Girama, zvakare, zvinotora chinzvimbo chake. The Voltaire Project rinotidzidzisa, zvishoma nezvishoma, zvose inonyatsobudirira mazano asina kutorwa ari ezvirevanguva kwemashifiti verbs somuenzaniso. A kwoUmambo padanho kukoreji bvumidzwa nyore kumira kunze kumabasa.
Ita Voltaire Project inokubatsira kuwana Voltaire certification nekuda kwekudzidza paIndaneti
Projet Voltaire inopa inodzidzisa zvakakwana paIndaneti. Ichaita sechinoshanduka kune iwe zvose kuti uzadze zvimwe zvipembenene, asi zvakare kutora danho shure shure kubudirira kwawakaita. Izvi zvisati zvamboitika kudzidziswa hupi zvichanyatsogadzirisa iwe pamwe nezvose zvakaoma kutendeka kwemashoko. Zvose zvinoitwa kuti zvikubatsire kuwana rukudzo rukuru mumakwikwi. Nzira imwe neimwe inofanirwa kuti iwe pachako iongorore unyanzvi hwepelenzi hwomudzidzi mumwe nomumwe.
Iyo Voltaire Project inobatanidza kudzidziswa kwakakwana kwekudzidzisa uye kuvimbiswa kwekunaka mune imwe chete kupa. Yakarongedzerwa nesangano rinopa zvikwangwani zvinokosha pachake, chirongwa chekudzidzisa icho chinonakidzwa mukurumbira wakanaka munharaunda yacho. Vadzidzi vane zvigadziro zvavanoda kuti vavandudze zuva rimwe nerimwe uye vadzidze zvinhu zvitsva nguva dzose.
Inonyanyozivikanwa spelling test kuwedzera kushanda kwako
Kuziva iyo yakakosha mirau yetypography kana kugona kuziva pleonasm haisi chete anecdotal hunyanzvi. Nzwisisa neizvi kuti hazvizokubatsire iwe chete kuwana iyo Voltaire Chitupa. Nyore kukwidziridzwa inokutendera iwe pamusoro pezvose kuti uwane mamaki epamusoro. Uye isu tinoziva kwazvo kuti kuita mashoma maperengo kukanganisa kunogona kutora chinhanho chakakosha muhupenyu hwako hwehunyanzvi. Kunyanya kana iwe uri kutsvaga kunyorera basa nekukurumidza.
VERENGA Email template kuti ipindure kune chikumbiro chemashoko kubva kune waunoshanda naye
Unyanzvi hwemutauro unowanikwa nekubatsirwa neProjekta Voltaire huchakubvumira kuti uwedzere mutsetse unonakidza pane CV yako. Chero mamiriro ezvinhu, hapana mubvunzo kuti iwe uchazobatsirwa zvakanaka mumaziso evaridzi. Kana uchinge wakachengetedzwa nemakanganisa asina hanya uye zvikanganiso zvakanyanyisa kana zvipikiso zvisingagoneki, iwe uchakwanisa kufadza mukuru wako anotevera. Uyu achagadziriswa neunyanzvi hwako kuti uone zviri nani spelling kunze kwechigadzirisho choga. Unyanzvi hunokosha huchakupa mukana wokupa kuvimbika nokukurumidza kune kambani yakaita chisarudzo chouchenjeri chokugamuchira iwe kumiganhu yayo.
Ita Voltaire Project Inokuendesa Kumhanzi Yakakurumbira yeOrgraph May 14th, 2020Tranquillus
pashureIta Chido Chako Basa NeElephorm Vhidhiyo Kudzidziswa
zvinoteveraCherechedza kutora musangano, mazano ekushanda